ကနီဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု – JIS.DIGITAL
Journey of Impartial Story
ကနီဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု
HK August 20, 2021
“မလုပ်ရဲတာ ဘာမှ မရှိဘူး” ဆိုသည့်အတိုင်း အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းအောင် ကာချုပ်မင်းအောင် လှိုင်၏ စစ်ကောင် စီတပ်သည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကနီမြို့နယ်အတွင်း ဒေသခံပြည်သူ ၄၀ဦးကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ကာ ၎င်း တို့၏ စက်ဆုတ်ရွံ့ရှာဖွယ် စွမ်းပကားကို ပြသခဲ့ပါသည်။ ပြည်သူလူထု၏ ကြည်ညိုမှု စိုးစဉ်းမျှပင် မရရှိသေးသော အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်း ဆောင်အတွက် ယင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်သည် ပထမဦးဆုံး မဟုတ် သကဲ့သို့ နောက်ဆုံးအကြိမ်လည်း မဖြစ်နိုင်သေးဟု ဆိုရပါမည်။
ယခုတစ်ပတ် Myanmar Peace Monitor ၏ အပတ်စဉ်သုံးသပ်ချက်ကဏ္ဍတွင် အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်နှင့် အပေါင်းအပါများ ကျူးလွန်ခဲ့သော ကနီဒေသ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်ကို အခြေပြုတင်ပြ သွားပါမည်။
ဘာကြောင့် ကနီဒေသ ဖြစ်ရသလဲ
စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့် စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ဖီဆန်သဖြင့် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်များ၏ ရက်စက်စွာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်း၊ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုများအလွန် မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဒေသအလိုက် စုဖွဲ့ထွက်ပေါ်လာသော ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) များသည် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ် များကို အခွင့်အခါသင့်သလို ခုခံတော်လှန်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအနက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်၊ ရပ်ရွာများရှိ ဒေသခံ PDF များသည် ထင်ရှားသည်ဟု ဆိုရပါမည်။
ကရင်နီပြည်နယ်အတွင်း ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KNDF) ၊ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ချင်းဒေသ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (CDF)၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြို့နယ်အလိုက် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(PDF)တို့သည် နွေဦး တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကို ထင်ရှားစွာ ခုခံတော်လှန်ပြခဲ့သလို တိုင်း ဒေသကြီး မြို့နယ်အလိုက် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(PDF)များတွင်လည်း စစ်ကိုင်းတိုင်း မြို့နယ်အလိုက် ပြည်သူ့ကာကွယ် ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF)များအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကို ခုခံတော်လှန်ခြင်း၊ ခြုံခိုတိုက် ခိုက်ခြင်းများအား ထင်ရှားစွာ လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါသည်။
Myanmar Peace Monitor မှ စုဆောင်းမှတ်တမ်းပြုထားသည့် စာရင်းအရ မေလ ၇ရက်မှ ဩဂုတ် ၉ရက်အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ် ၁၅ခုတွင် အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) များအကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ရက်ပေါင်း ၄၆ ရက် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားမှုများအနက် ချင်းပြည်နယ်အစပ်မြို့နယ်ဖြစ်သည့် ကလေးမြို့နယ်ပြီးလျှင် ကနီမြို့နယ်သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းအ တွင်း ဒုတိယမြောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးဒေသ ဖြစ်ပါသည်။ ကနီမြို့နယ်နှင့်အတူ မင်းကင်းနှင့် ပုလဲမြို့ နယ်တို့သည်လည်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကို ခုခံတော်လှန်မှုဒုတိယအများဆုံးဒေသများ ဖြစ်ပါသည်။
အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သည် ၎င်းတို့အား ခုခံ တော်လှန်ရေး အားကောင်းသည့် ဒေသများကို အစွမ်းကုန် ရက်စက်စွာ ချေမှုန်းခဲ့သည်မှာ ချင်းပြည်နယ် မင်းတပ် မြို့နယ်အတွင်း PDF များအား လေကြောင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုများက သက်သေပြနေပါသည်။
ကနီဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်
ဇူလိုင် ၈ရက်ကတည်းက နယ်မြေရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်လာသည့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များနှင့် ကနီမြို့ နယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) အကြား ဇူလိုင်လ ၇ရက်၊ ၉ ရက်၊ ၁၅ရက်၊ ၂၃ရက်နှင့် ၂၆ရက်နေ့များအ တွင်း တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းနောက် အကြမ်း ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအနေဖြင့် ကျေးရွာများအတွင်း ဝင်ရောက်ကာ မြင်မြင်သမျှသော အရပ်သားပြည်သူတိုင်းကို PDF များဟု စွပ်စွဲကာ လိုက်လံဖမ်းဆီးသဖြင့် ရွာသူ ရွာသားများ ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ လက်မှ “အားလုံး မလွတ်မြောက်ခဲ့”ဟု ဆိုရပါမည်။
ကနီမြို့နယ် ယင်းရွာနှင့် တစ်မိုင်ခန့်အကွာရှိ တောအတွင်း အရပ်သားရုပ်အလောင်း ၁၆လောင်းကို ဇူလိုင် ၁၁ရက်၊ ၁၂ ရက်နေ့များတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ကနီမြို့နယ် ယင်းရွာ၊ ကုန်းသာရွာ၊ ထောက်ကြံ့ကုန်းရွာနှင့် ရေးဦးမြို့နယ် ပလူဇ ဝရွာမှ ရွာသားများ ဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဒေသခံများက ပြောပါသည်။
ဇူလှိုင်လ ၂၈ရက်တွင်လည်း ကနီမြို့နယ် ဇီးပင်တွင်းရွာ အနောက်ဖက် ယာတောထဲတွင် အရပ်သားရုပ်အလောင်း ၇လောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အသက် ၆၀အထက် ရှိသူနှစ်ဦး၊ မသန်စွမ်းသူ တစ်ဦးနှင့် အသက် ၁၈နှစ်နှင့် ၃၀နှစ် အကြားရှိသူ လေးဦး ဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိပြီး သဂြိုလ်မှုပြုပေးခဲ့သူဒေသခံများက ဆိုပါသည်။
ဇူလိုင် ၂၉ရက်နေ့၊ ဇီးပင်တွင်းရွာ အနောက်ဖက် ယာတောထဲတွင်ပင် ပုတ်ပွနေပြီး အတည်ပြုရန်ခက်ခဲ့သည့် အရပ်သားရုပ်အလောင်း ၅လောင်းကို ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဇူလိုင် ၃၀ရက်နေ့၊ ကနီမြို့နယ် တောင်ပေါက်(အ ရှေ့)ရွာအနီး တောထဲတွင် အရပ်သားရုပ်အလောင်း ၁၂လောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ခိုတွင်းရွာမှ ၂ဦး၊ သရက်တောရွာမှ ၁၄နှစ်အရွယ် ကလေးအပါအဝင် ၇ဦးနှင့် ကနီမြို့ပေါ်မှ ၃ဦးတို့ ဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူများက သတင်းဌာန များကို ပြောဆိုထားပါသည်။
အဆိုပါ ကနီဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခံရသည့်ဖြစ်စဉ်အတွင်း အရပ်သားရုပ်အလောင်း ၄၀ အထိ တွေ့ရှိထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ကျန်ရှိနေသေးသော မြှုပ်နှံထားသည့်ရုပ်အလောင်းများကိုမူ အကြမ်းဖက်စစ် ကောင်စီတပ်များက မိုင်းများထောင်ထားသဖြင့် တူးဖော်ရန် အခက်ခဲရှိနေကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ ဒေသခံများ က ဆိုပါသည်။ ယခုလိုသတ်ဖြတ်ခံကြရသူများသည် အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအား ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးကြသည့် ဒေသခံပြည်သူများသာ ဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) အဖွဲ့ဝင်များ မဟုတ်ကြဟု ဆိုပါသည်။
“ သေဆုံးသွားတဲ့ သူတွေရဲ့ အသက်တွေ၊ ဘဝတွေ အလဟသက်မဖြစ်ဖို့ ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ပြန်ပြီးတော့ တရားဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ဖို့၊ နောက်တခါဒီလိုမျိုး ထပ်မဖြစ်အောင် သမိုင်းမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေပြနိုင်ဖို့၊ နောက်တခါမဖြစ်ဖို့ တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နေပါတယ် ”
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်း (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ – NUG)
လက်နက်မဲ့ ပြည်သူများကို ကာကွယ်ပေးပါ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)၏ ကုလသမဂ္ဂအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းကတော့ ကနီမြို့နယ်အတွင်း အရပ်သားများ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်များကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဂူတာရတ်ထံ တိုင်ကြားထားသကဲ့သို့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဥက္ကဌနှင့် အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များထံလည်း အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်အတူ မြန်မာနိုင် ငံအတွင်း အလုံးစုံပျက်ယွင်းနေသော တရားစီရင်ရေးအခြေအနေတွင် အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ကာချုပ်မင်း အောင်လှိုင်နှင့် အပေါင်းအပါများ၏ အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းအား နိုင်ငံတကာတရားရုံးများမှတဆင့် အရေးယူနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ဦးကျော်မိုးထွန်းက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကာချုပ်မင်းအောင် လှိုင်၏ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ကရင်နီပြည် နယ်တွင်လည်း တွေ့နိုင်ပါသည်။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ် တပ်စွဲထားသည့် ဒီမောဆိုမြို့နယ် စံပြ(၆)မိုင်ရွာတွင် အရပ်သားပြည်သူ ရုပ်အလောင်း ၄လောင်းကို ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်က တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း ကရင်နီ ပြည်နယ်အခြေစိုက် ကန္တာရဝတီတိုင်းမ်သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ဇွန်လ ၁၅ရက်တွင်လည်း မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ပေါက်မြို့နယ်အတွင်း အိမ်ခြေ ၂၀၀ကျော်ရှိသည့် ကင်းမရွာ မီးရှို့ခံခဲ့ရပြီး ကျေးရွာ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် မီးလောင် ပြာကျခဲ့ရကာ သက်ကြီးရွယ်အိုအချို့ သေဆုံးခဲ့ရသည်။
စစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် အပေါင်းအပါများ၏ လက်ချက်ဖြင့် အသက် ပေးခဲ့ရသူပေါင်း ၉၆၅ဦး ကျော်လာပြီဖြစ်သည်။ ဖမ်းဆီးခံရသူပေါင်း ၇၀၀၀ကျော်ရှိပြီး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေစဉ်အ တွင်း အသက်သေဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း ၃၂ဦးအထိ ရှိသည်ဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (AAPP) က ဆိုပါသည်။ RFA သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ “ယနေ့ဖမ်းဆီးခံရပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် အလောင်းလာ ယူခိုင်းသည့် ဖြစ်စဉ်ပေါင်း အနည်းဆုံး ၃၀” ရှိနေပါသည်။
ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သည် ကနီဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်စဉ်နည်းတူ ၂၀၁၇ခုနှစ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်သည့် အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း ရခိုင်ပြည် နယ် မောင်း‌တောြမို့နယ် အင်းဒင်ရွာတွင်လည်း အရပ်သားပြည်သူ ၁၁ဦးကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ သည်။ အင်းဒင်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ စစ်တပ်အနေဖြင့် မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ဖုံးမနိုင် ဖိမရဖြစ်ကာ လူသိရှင်ကြား လက်ခံခဲ့ရပြီး ယခုအခါ နယ်သာလန် နိုင်ငံ သဟိတ်မြို့ရှိ နိုင်ငံတကာတရားရုံး (ICJ)တွင် ဂန်ဘီယာနိုင်ငံနှင့် တရားရင်ဆိုင်နေရပါသည်။
ထို့ပြင် ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)နှင့် တိုက်ပွဲများအတွင်း ကျောက်တော်မြို့နယ် တင်းမရွာသား ၁၈ဦးကို ဖမ်းဆီးကာ အစဖျောက်ခဲ့ပြီး တင်းမရွာကိုလည်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။
ဆိုရသော် အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သည် ၎င်းတို့ ၏ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့် အရပ်သားပြည်သူပေါင်း များ စွာ ရှိနေပြီဟု ဆိုရပါလိမ့်မည်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း နဂိုကတည်း ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးသည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ် များသည် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည် နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် စသော တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ဖုံးဖိတိမ်မြုပ်နေ သော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုပေါင်း များစွာရှိနေခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ၎င်းတို့အား ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြသည့် နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလတွင်မူ ၎င်းတို့၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများ၊ ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်မှုများ၊ အစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုများကို ပိုမိုထင်ရှားစွာ မြင်တွေ့လာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် ဖမ်းဆီး၊ စစ်ဆေး၊ နှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြမ်းမဖက်ပြည်သူ့အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (CDM) တွင် ပါဝင်လာသည့် ဗိုလ်ကြီးဟိန်းသော်ဦးက “ဒီလိုလုပ်ဖို့ ဝန်လေးနေမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်မှာ ပိုပြီးတော့ ပေါ်ပေါ်ထင် ထင်လုပ်လာတာ”ဟု ဆိုပါသည်။
“သေဆုံးသွားတဲ့ သူတွေရဲ့ အသက်တွေ၊ ဘဝတွေ အလဟသက်မဖြစ်ဖို့ ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ပြန်ပြီးတော့ တရားဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ဖို့၊ နောက်တခါဒီလိုမျိုး ထပ်မဖြစ်အောင် သမိုင်းမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သက် သေပြနိုင်ဖို့၊ နောက်တခါမဖြစ်ဖို့ တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်”ဟု အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောဆိုထားပါသည်။
ကနီဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂထံတိုင်ကြားခဲ့သည့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် နေထိုင်သော ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ကြံစည်နေသည့်လုပ်ရပ်များကို မြင် တွေ့နေရသည့်အတွက် အာဏာ သိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ “မလုပ်ရဲတာ ဘာမှမရှိဘူး” ဆိုသည့်စကားသည် အစဉ်သတိပြု နေရပေလိမ့်မည်။ နောက်ထပ် ကနီဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုမျိုး မကျူးလွန်နိုင်တော့ဟု မည်သူမျှ အာမခံနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကနီမြို့နယ် ကျေးရွာများအတွင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ယနေ့အထိတော့ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်နှင့် အပေါင်းအပါများအနေဖြင့် သတင်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ မကွေးတိုင်း ကင်းမရွာမီးရှို့မှုဖြစ်စဉ်ကဲ့သို့ သတင်းအမှားများဖြန့်ကာ ဖုံးဖိရန် ကြိုး စားနေသလား၊ မန္တလေးတိုင်း ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်အတွင်းက အရပ်သားများကို ပစ်သတ်ကာ PDF အဖွဲ့ဝင်များ ဟု စွပ်စွဲလုပ်ကြံရန် လုံးပမ်းနေသလားဆိုသည်က အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသာ သိရှိပါလိမ့်မည်။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရခြင်းထက် အသက်သေသည်က သာ၍မြတ်ကြောင်း ပြသ သွားခဲ့သည့် ဩဂုတ်လ ၁၀ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၄၄လမ်းရှိ ဖြစ်ရပ်ကိုပင် ကာချုပ်မင်းအောင် လှိုင်နှင့် အပေါင်းအပါများကတော့ ၎င်းတို့ပယောဂကင်းသယောင် ထုတ်ပြန်နေပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ တပ်၏ ပြည်သူလူထုအပေါ် ကျူးလွန်ချိုးဖောက်ခဲ့သော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်၊ လုပ်ရပ်တိုင်းအတွက် ၎င်းအနေဖြင့် ပြန် လည်တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံရမှသာ နွေဦးတော်လှန်ရေးနှင့်အတူ ပေးဆပ်ခဲ့ရသည့် အသက်တိုင်း၊ ဘဝတိုင်းအတွက် မျှတပါလိမ့်မည်။
ကနီဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂထံတိုင်ကြားခဲ့သည့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် နေထိုင်သော ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ကြံစည်နေသည့်လုပ်ရပ်များကို မြင် တွေ့နေရသည့်အတွက် အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ “မလုပ်ရဲတာ ဘာမှမရှိဘူး” ဆို သည့်စကားသည် အစဉ်သတိပြု နေရပေလိမ့်မည်။
နောက်ထပ် ကနီဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုမျိုး မကျူးလွန်နိုင်တော့ဟု မည်သူမျှ အာမခံနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကုလသမဂ္ဂအပါအတွင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် ကာ ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အား လက်နက်ရောင်းချနေမှု ပိတ်ပင်ရေးနှင့် အမြန်ဆုံးကြား ဝင်ဖြေရှင်းရေး ဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှုမြင်မိပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ Myanmar Peace Monitor ၏ အပတ်စဉ်သတင်းသုံးသပ်ချက်မှ ထုတ်နှုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ (အပြည့်အစုံကို Click နှိပ်၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်)
Tags: Myanmar Peace Monitor What Happened Myanmar ကနီဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု
Previous: အကြမ်းဖက်သမားများ ရန်မှ လွတ်ကင်းရေး
Next: နွေဦးတော်လှန်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ၏ ဖြစ်တည်မှု လားရာ . . .
လိမ်လည်မှုများနှင့် စစ်တပ် အပစ်ရပ်ခြင်းဆိုရာဝယ် . .
အကျပ်အတည်း ကာလအတွင်းက မြန်မာအမျိုးသမီး ဦးဆောင်မှု
မြင်သားရွာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမှု
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ
JIS = Journey of Impartial Story.
Covid -19 ကာလအတွင်းအလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည့် သတင်းသမားအချို့ကို စုစည်းကာ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံများကို အသုံးချကာ သတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ရုပ်သံသတင်းများအပြင် အင်ဖိုဂရပ် ဖစ်များကို ထုတ်လုပ်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေး(ရွေးကောက်ပွဲ)၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာများကို သတင်းအချက်လက် အခြေခံကာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းကာ ရေးသားထုတ်လုပ်ကာ www.Jis.digital ဝက်ဆိုက်ဒ်နှင့် JIS ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် တင်ဆက်ဖော်ပြသွားပါမည်။
Copyright © JIS.DIGITAL. | MoreNews by AF themes.